Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Ndị na-egwu bọọlụ Oceania Chris Wood nwata akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Akụkọ ndụ anyị nke Chris Wood na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Mbido ya, Ndị nne na nna, Ezinaụlọ, Enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara “Original Mix“. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị nke Chris Wood's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya.
Ndụ na ịrị elu nke Chris Wood.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye egwu na-akpali akpali nke nwere anya maka ịme ihe mgbaru ọsọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Chris Wood nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ banyere Chris Wood Childhood - mmalite ndụ na ezinụlọ:
Na-amalite, aha ya nile bụ Christopher Grant Wood. A mụrụ Chris Wood na 7th ụbọchị Disemba 1991 na nne ya Julie Wood na nna, Grant Wood na Auckland, obodo dị na North Island nke New Zealand.
A mụrụ ya dị ka nwa nke abụọ na nwa nwoke nke nne ya sere n'okpuru.
A mụrụ Chris Wood n'ụlọ ndị Kraịst nwere mgbọrọgwụ ndị agha yana ọkwa ezinụlọ sitere na etiti. Nna nna ya sere n'elu bụ onye ọchịagha lara ezumike nká tupu ọ nwụọ.
Ya na nwanne ya nwanyị tọrọ ya bụ Chelsey Wood tolitere, onye dị ka ya onwe ya na-aghọkwa onye egwuregwu bọọlụ ma ama.
Akụkọ banyere Chris Wood Childhood na Ọzụzụ Carelọ Ọrụ:
Nwanne nwoke na nwanne nwanyị buru ibu ka ha nọ n'ụlọ na-egwuri egwu mgbe niile. Ndị nne na nna Chris gbara ya ume ka ọ sonyere nwanne ya na Onehunga Sports, ebe ọ mụtara ịnụ ụtọ egwuregwu otu.
N'ịchọ ịmata ịmụtakwu, Chris na nwanne ya nwanyị gara n'ihu na-enweta agụmakwụkwọ football na Wynrs, agụmakwụkwọ dabeere na Auckland guzobere na mbụ All White Wynton Rufer. Ọ bụ na Wyners Chris Wood mepụtara usoro ya ma dị njikere ịga ọnwụnwa ịgba bọl.
Akụkọ nke Chris Wood Childhood - Ndụ Ndụ Mmalite:
Ka ọ na-erule afọ iri na otu, ezinụlọ Wood hapụrụ obodo New Zealand bụ Auckland wee kwaga na ime obodo Waikato nke Cambridge nke dị kilomita iri abụọ na anọ na ndịda-ọwụwa anyanwụ nke Hamilton.
Obodo ezinụlọ ya kwagara “Cambridge"A maara dị ka"Obodo nke Osisi & Ndi mmeri“. Mgbe ha nọ ebe ahụ, Chris na nwanne ya nwanyị gara ụlọ akwụkwọ St Paul Collegiate.
Chris nwere nnukwu ịnụ ọkụ n'obi ịga n'ihu n'ọrụ ya site na ebe ọ hapụrụ ya. Mmasị ya maka football hụrụ ya ka ọ na-agafe ule na ịdenye aha ya na klọb nke mpaghara Cambridge FC. N'okpuru ebe a bụ foto nke obere Chris na ndị otu ya.
Chris Wood (esere aka na oke aka ekpe nke ahịrị) - Oge Akpa Ya na Cambridge FC Academy.
Dị ka Weebụsaịtị Cambridge FC, Mgbe Chris Wood dị 14, ọ bụbu nnukwu ngalaba - nke pụtara na ọ dị elu ma sie ike. N'oge ahụ, nwata ahụ dị njikere igwu egwuregwu football.
Chris Wood Untold Biography - tozọ A Ma Ama:
Laa azụ n'oge ahụ, onye otu Cambridge FC bụ Ken Hobern, enyi nke ezinụlọ Wood nwere obi ụtọ ịmara na nwa ahụ ga-enwe ọhụụ ndị otu egwuregwu mbụ.
Ị maara?… Ken kwere nkwa Chris Wood $ 100 ọ bụrụ na ọ ga - enwe ike iru ihe mgbaru ọsọ n’amaghị ihe mgbaru ọsọ ahụ dị naanị nkeji oge na nkwa ya.
Chris banyere egwuregwu ahụ dịka onye dochie ya na emume mgbaru ọsọ ya mgbe ọ tụchara akara na mpụta ya gụnyere ọyoụ nke na-etegharị mkpịsị aka ya. Ihe a rụzuru mere ndị niile bọọlụ na ndị ezinụlọ ya niile obi ụtọ.
Mgbe o nwesịrị ọgwụ na ndị na-asọmpi obodo Hamilton Wanderers na oge na-esote, Chris Wood dọtara uche nke ASB Premiership club Waikato FC onye nwetara ya na 2007.
Ọbụna mgbe ọ banyere na klọb ahụ, ọtụtụ klọb ndị ama ama na Europe lebara Wood anya bụ ndị rịọrọ maka mbinye aka ya. Naanị klọb na-egwu egwuregwu 5, klọb ndị England napụrụ Chris Wood, West Brom.
Chris Wood Bio - Bilie Iji Mara Aha:
Onye nchịkwa Roger Wilkinson gwara Wood ka ọ gaa West Bromwich Albion's Academy, onye guzobere ikpe maka ya nke ọ gafere na agba na-efe efe.
Mgbe ọ nọ na agụmakwụkwọ, Chris Wood achọtara ụdị ọghọm dị ukwuu maka ụdị agụmakwụkwọ West Brom na-eto eto, ihe ngosi nke mere ka onye nkuzi ya tinye ya na ndepụta ndị otu ndị okenye ya.
Na Eprel 2009 merụrụ ahụ ọtụtụ ndị egwuregwu West Brom hụrụ ka a na-enyefe Wood ọkpụkpọ oku na mberede maka ndị otu egwuregwu mbụ nke West Brom. Ọ si na bench pụta wee bụrụ onye New Zealand nke ise ọ ga-egwu na Premier League.
Mgbe ọ nọ n'England, o ji obi umeala jeere ya ọrụ site na ịga mbinye ego, na-agbasiwanye ike site n'oge oge, ma na-etinye uche dị ka o nwere ike site n'aka onye nkuzi ọ bụla.
Ngwa ngwa rue oge edere, a na-ahụta Wood ugbu a dị ka onye na-eti egwu maka bọọlụ bọọlụ bekee, ebe ọ debanyere aha ihe karịrị 100 na klọb niile ọ ga-egwuri egwu.
Onye egwu 6 ft 3 onye bụ osote onye isi nke Burnley FC n'oge ederede ugbu a na-enwe mmekọrịta siri ike na onye isi mmụọ mmụọ nke klọb Ashley Barnes.
Chris Wood bilie na ama.
Banyere Kirsty Linnett, Chris Wood hụrụ ya n'anya:
Site na ịrị elu ama ya, o doro anya na ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ Burnley na Newzealand ga-echerịrị onye Chris Wood Girlfriend ma ọ bụ nwunye nwere ike ịbụ.
Gwa eziokwu! Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ na ọmarịcha mma ya agaghị eme ka ọ bụrụ enyi ụfọdụ ndị nwanyị.
Agbanyeghị, n'azụ Newzealander na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị mara mma na onye mara mma nke Kirsty Linnett.
Nwanyị nwanyị mara mma nke Chris Wood sere ya n'okpuru ya na nwoke ya n'otu ụlọ ahịa kọfị na Alderley Edge, Cheshire. Ndị enyi abụọ ahụ malitere ịlụ na 14th nke July 2015.
Nwunye Chris Wood Nwunye- Kirsty Linnett.
Ị maara?… Ọmarịcha nwa nwanyị Chris Wood bụkwa ọkachamara n'egwuregwu. Dị ka n'oge edere, ọ na-egwuri egwu maka Liverpool na England n'okpuru-23 otu mba ụwa. N'okpuru ebe a bụ foto nke Kirsty Linnett na ndị otu ya Liverpool, ka ọ na -emegide onye mmegide.
Kirsty Linnett na-arụ ọrụ maka Liverpool.
Ma enyi nwoke ma enyi nwanyị nwere obi ụtọ maka ụzọ ọrụ ibe ha. Dabere na Kirsty… 'Ọ ga-amagbu onwe ya ma anyị leghachi anya azụ mgbe anyị toro wee kwuo na anyị abụọ ga-ebi ndụ anyị nro,'
Kedu ihe dị ka di na nwunye ahụ, na-eme dị ka ndị egwuregwu bọọlụ ọkachamara: Maka Linnett na Wood, “Bọọlụ na-ebu ụzọ abịa“. O kwetara na dị ka di na nwunye, mgbe ụfọdụ ha na-eme ihe ike megide ibe ha mgbe ha mechara egwuregwu.
Ma Linnett na Chris anaghị arụrịta ụka maka ime njikwa ebe ọ bụ na football na-adị njikere na telivishọn ha n'ụlọ.
Ọ bụ ihe ijuanya nye ụfọdụ ndị Fans na Wood na Linnett agaghị alụ di na nwunye n'oge edere. Agbanyeghị, ikpe ikpe n'ụzọ ha abụọ na-anụ ụtọ ndụ ha, o doro anya na agbamakwụkwọ ha nwere ike ịbụ usoro iwu na-esote.
Chris Wood na Kirsty Linnett- Kachasị mma ọkachamara Football Couple
Chris Wood Ndụ nke Onwe:
Factsmata eziokwu banyere Chris Wood Personal Life ga-enyere gị aka ịmatakwu ụdị onye ọ bụ na egwu egwuregwu.
Asides football, Wood soro ndi ozo dika egwuregwu; horsegba ọsọ ịnyịnya, ọgba rugby, cricket, baseball na Netball. Ọ hụrụ n'anya na-ekere òkè na-agbapụ na agwakọta okpukpu abụọ okpukpu abụọ.
Lee ụfọdụ ihe omume Chris Wood n'èzí.
Na mgbakwunye na ndụ onwe onye Chris Wood, ọ bụ onye na-emekọ ihe, na-ekwurịta okwu, na-adị njikere mgbe niile maka ntụrụndụ. Enweghi ike ime ihe ngwa ngwa, iche echiche, ma nwee obi iru ala n'ihi na ha bụ ọtụtụ ihe ịme.
Ndụ Ezinụlọ Chris Wood:
Chris Wood nke pụtara na ọ bụ otu n'ime ndị na-akpa afọ ezinụlọ ya nwere obi ụtọ inwe ya mebere ụzọ nke ezinụlọ ya maka nnwere onwe ego site na football. Ugbu a, lee ụfọdụ ozi gbasara ndị ezinụlọ ya.
Chris Wood Papa: Grant Wood, bụ onye obere ihe banyere ya bụ nna Chris. Enwere ya obi ekele maka ịgba nwa ya nwoke na nwa ya nwanyị ume ka ha sonye na Onehunga, nke mere ka ọ bụrụ ọgbakọ mbụ ha. N'adịghị ka nwunye ya, ọ bụ obere mgbasa ozi na ya.
Chris Wood Mum: Mara mma Julie Wood bụ Chris 'Mama. N'adịghị ka di ya, ọ gbalịsighị ike izere mgbasa ozi. N'okpuru ebe a bụ foto nke ọmarịcha Julie ya na nwa ya nwoke Chris ka ha abụọ gara ụbọchị ANZAC ebe ha mere ememme nna nna Chris.
Zute Julie Wood- Nne Chris Wood.
Chris Wood Nwanne: Ugbu a, ka anyị kọwakwuoro gị banyere Chelsey onye ọzọ bụ nwanne nwanyị Chris Wood nke na-agba bọọlụ dịka ya. Chelsey nọchitere obodo ya, New Zealand na 20s n'oge 2008 U20 Women's World Cup na Chile.
Chelsey sokwa na 2010 U20 Women World Cup na Germany. Gba egwu n'okpuru 20 n'afọ 2008 site na ntinye pụtara na ọ tọrọ nwanne ya nwoke.
Ị maara?… Chelsey mgbe ọ dị afọ 4 malitere iso nwanne ya nwoke gbaa bọl. Nke a bụ oge ha abụọ amalitebeghị igwu egwu na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ha. Site na afọ 4 ruo 12, Chris Wood na-egwuri egwu na otu otu dị ka nwanne ya nwanyị nke okenye mara mma nke eserese n'okpuru.
Chris Wood Sister ya na nwanne ya nwoke.
Chris Wood nne na nna: N’etiti ndị nne na nna ochie ya, Chris Wood nọ nso n’otu n’ime ndọkpara ya ndị na-anaghị abịakarị ma echefughị ​​echefu. N'okpuru ebe a bụ foto nke nna nna ya ukwu onye ọ hụrụ n'anya nke ukwuu. Cheta: Nnukwu osisi Wood bụ onye agha lara ezumike nka tupu ọ gafee.
Zute Wood's Granddad onye bụbu onye agha tupu ọ gafere.
Ndụ Chris Wood:
"O meela mma inwe anụ ọhịa a !! Gbọ ala, hụ ya n'anya!" Okwu ndị ahụ bụ okwu Chris Wood ka ọ masịrị ụgbọ ala ya, egwu na-enye nghọta ka mma banyere ụdị ndụ ya.
Ihe ndụ Chris Wood dị ka ya.
Maka osisi, didinggha n'etiti ịdị irè na olulu na obi ụtọ na olulu abụghị nhọrọ siri ike. Ọ hụrụ n'anya iji ego ego bọọlụ ya n'ihe ọ hụrụ n'anya.
Eziokwu nke Chris Wood:
Ị maara?… Chris Wood bụ otu n’ime aha ndị a na-akwanyere ùgwù ruo New Zealand football na-enwe nchegbu. A kwanyeere onye na-aga n'ihu ùgwù nke na a họpụtara ya ka ọ bụrụ onye isi na ndị otu egwuregwu ndị otu egwuregwu New Zealand.
Onye na-eme ihe maka Women football: Kedu ihe ọzọ ị tụrụ anya ya. Nwanne nwanyị Chris Wood na nwunye ọ ga-abụrịrị ndị ọgba bọọlụ ọkachamara.
Àjà ndị nwanne ya nwanyị chụrụ na mgba nke enyi ya nwanyị Linnett chere ihu emeela ka Wood bụrụ onye na-akwado ịkwado ọnọdụ ka mma na egwuregwu ụmụ nwanyị. “Ọ bụghị banyere inwe enyi nwanyị na-agba bọl ma ọ bụ nwanne nwanyị na-agba bọl, ọ bụ ime ihe ziri ezi. " Chris Wood otu ugboro gwara ndị Guardian.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ Chris Wood Childhood Akuko Untold Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
West Bromwich Albion Football Akwụkwọ edemede
Jannik Vestergaard Nwatakịrị Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu